Imikhondo eshiywe abangakholwa | Amadoda anesitayela
Imikhondo eshiywe abangakholwa
U-Alicia tomero | 27/05/2022 10:00 | Izithandani Nezocansi
Kuyaphazamisa futhi kuyacasula kakhulu ukuthola ukuthi kunezinto eziningi eziqondane ngokusobala futhi ezikhomba ukuthi umlingani wakho akathembekile Mhlawumbe kuyimicabango nje futhi konke akhombe ukuqondana okungasenasambulo, kodwa lapho seziningi kakade, yonke into ikhomba ukungathembeki. sizohlangana hlobo luni lwezinkomba abangazishiya uma kwenzeka into efana nalena.
Ukwanda kwamacala okungethembeki kuye kwanda, phakathi kwanoma yiluphi uhlobo lwemibhangqwana noma imishado. Izici ezichaza lezi zenzakalo zihluke kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi kungenxa yezizathu zemizwa, izinkinga zokuziphatha, izakhi zofuzo, eziphilayo, njll. Kunoma yiliphi kulawa maqiniso, kufanele kuphawulwe kuphela yimiphi imikhondo eshiywe ngabangakholwa.
1 Izinkundla zokuxhumana ziwumthombo omkhulu
2 amanga aqhubekayo
3 Ushintsho olungcono
4 Ukuhamba okungajwayelekile nokungalindelekile
5 Uma efika ekhaya uyageza.
6 Ngokwengqondo uhlezi ucabanga ngokunye njalo
7 Abangane bakhe sengathi kukhona abakufihlayo
8 Kwenzekani ocansini?
Izinkundla zokuxhumana ziwumthombo omkhulu
Ukungathembeki okuningi kuqala nge-inthanethi. Iqiniso lokuxhumana nabantu abangaziwa kakhulu futhi nokubhekana nemfihlakalo umuntu othile ayibamba ngemuva kwaleyo phrofayili, lenza andise ilukuluku, bese kufika othintana naye futhi ekugcineni usuku.
Ukuhlangana nabantu abasha kuwuhlelo losuku ngenxa yobuningi be amawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zokudlala ngothando ku-inthanethi. Umakhalekhukhwini ngokuvamile uyindlela eyinhloko futhi lapho umlingani wakho evame ukufihla noma ukuvimba ukufinyelela kwakhe, kulapho esinye sezizathu zokungaqoma singena khona.
Izimo zengqondo abangase babhekane nazo mayelana nendlela abebelusebenzisa ngayo ucingo ngaphambilini zizonikeza umkhondo okungenzeka ukuthi babe yikho ukudlala ngothando nabanye abantu. Ukusetshenziswa okuqhubekayo kwalesi divayisi kuzonikeza okuningi ukukhuluma ngakho, njengoba kuzohlala kuqaphele izaziso. ngisho njalo uzoba nokulawula okuphelele kokufinyelela kwakho ukuze abanye abantu bangakwazi ukuba nokuxhumana noma ukufunda okuqukethwe kwayo.
Ukwengamela, ukwengamela noma yiliphi iqiniso elinezaba kungase kube amacala angenamsebenzi. Iqiniso yilapho lolu chungechunge lwezenzakalo ziyaqhubeka kakhulu futhi uqala ukuxhuma amachashazi futhi uyabona ukuthi izikhathi eziningi azihlangani.
Mhlawumbe Aziqale izingxoxo nokuthi omunye umuntu uphika amaqiniso futhi usola umlingani ngokulawula kakhulu, ukudideka futhi ngisho nomhawu omkhulu. Ngokujwayelekile uma kwenzeka ukuthi umuntu obengathembekile ubanjwe, impendulo iyohlale iqaphile, uzosabela kabi, ngentukuthelo futhi uzothukuthela kakhulu.
Kuyenzeka ushintsho olungalindelekile kanye nokushintsha kwesithombe, ugqoka kahle izinwele zakhe futhi asebenzise ngisho namakha lapho ayengakaze asetshenziswe ngaphambili, anganikeza imikhondo emincane yokuthi kukhona okwenzekayo.
Mhlawumbe wushintsho oluncane nje ngoba ubhekene nakho ushintsho lwenkinga ekhona futhi ifuna ukuzisungula kabusha. Zama nje ukubheka ukuthi lezi zigameko ziqondana nini nokuthi kwenzekeni emini ngoba mhlawumbe ubekade ejola.
Ukuhamba okungajwayelekile nokungalindelekile
Lokho kuphuma okungajwayelekile futhi ngezaba ezinkulu njalo benza abantu bakhulume. Uma kunochungechunge lwezigigaba ezingasenzeki ngokujwayelekile, sekuyinto enemibuzo yayo. Ukuhamba kwakho okungalindelekile njalo banezaba, uthi kufanele acoshe okuthile okubalulekile, enze umsebenzi othile futhi ahlale eqhamuka nezimpendulo ezingacacile.
Futhi, lapho ufuna ukujula odabeni uthola ukuzivikela futhi uthi, ingabe angisakwazi ukwenza lutho? Angikwazi ukuphuma? Kulezi zimo ungasebenzisa ithuba ukusho lokho uzomphelezela uyokwenza okuthile ndawana thize eduze, lapha uzobona ukuthi isabela kanjani. Uma ekhungatheka noma ephazamiseka, mhlawumbe kungenxa yokuthi ubezokwenza into angafuni ukwazi ngayo.
Uma efika ekhaya uyageza.
Kuyinto evamile kakhulu. Abantu abaningi abangathembekile lapho bebuya othandweni lwabo nesithandwa sabo bazama ukugeza ukuze basule noma yimuphi umkhondo lokho kungabasola. Uma ngempela ukusola okuthile, bheka ezinye iminonjana ezingase zisale, ezifana ezingutsheni zakhe. Ungathola amasampula amanye amakha ngisho nebala elincane elingalindelekile.
Ngokwengqondo uhlezi ucabanga ngokunye njalo
Kungcono ukungagxumeli eziphethweni, kodwa kukhona ekhanda lakhe futhi lokho kumenza abe nekhanda kwenye indawo. Lokhu akulona uphawu oluhle uma engakuchazi ukuthi ucabangani futhi umbuka ngempela sengathi Ngalahleka ohlotsheni oluthile lomcabango ongaqondakali.
Abangane bakhe sengathi kukhona abakufihlayo
uma nihlala eqenjini akusekho lokho kudlidliza okwakukhona. Kwesinye isikhathi isimo siyashuba bese kwakhiwa ukuthula okusolisayo. Kufana nokuthi awukwazi ukuba khona ngaleso sikhathi ngoba kubonakala njengokucasulayo. Kulokhu akukho okungenziwa, awukwazi ukudala isigameko futhi ube yi-paranoid, kodwa kuzodingeka uziphathe sengathi akwenzekanga lutho.
Mhlawumbe kulesi sikhathi kunemibono emibili ehlukene. Izindlela zokuziphatha ngokuvamile azifani, kodwa okuvame kakhulu lokho ucansi luyancipha ngenani lezikhathi. Abanye abantu abagcini nje ngokuzwa ukuthi ucansi luyancipha, kodwa ngendlela olukhula ngayo. Kungenzekani? Ukuthi lowo muntu unezinye izinto ezimkhathazayo nezinto azithandayo angazange abe nazo ngaphambili futhi angase abonise nokwenyuka libido noma ukwehla okukhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Imikhondo eshiywe abangakholwa
Indlela yokunamathisela isikhumba emisipha
Uma indoda ingakuthandi iziphatha kanjani?